Raràn’i Shina Tsy Hitanisa Vaovao Avy Any Ivelany Ny Media · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2013 3:44 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, srpski, Italiano, Dansk, 日本語, Aymara, বাংলা, English
Namoaka fepetra vaovao manakana ireo mpilaza vaovao sy fikambanana hafa tsy hitatitra ny vaovao avy any ivelany tsy nahazoana alalana ireo manampahefana amin'ny fampahalalam-baovao ao Shina.
Navoakan'ny Fitantanana Ankapobeny ny Gazety, ny Trano Fanontàna, ny radio, ny Sarimihetsika ary ny Fahitalavitra ho fanta-bahoaka tao anaty filazana [zh] navoaka ny 16 aprily 2013 ny fanaraha-maso tsy misy indrafo, tsy nisy andro iray akory taorian'ny nanambaran'ny New York Times azy ho nahazo loka Pulitzer tamin'ny tatitra an-gazety mikasika ny harena miafin'ny fianakavian'i Wen Jiabao, praiminisitra shinoa .
Ho valin'io tatitra io, nosakanan’ny governemanta shinoa ny tranonkalan'i New York Times, ary koa ny anaran'i Wen Jiabao tao amin'ny Shina Weibo.
Fanampin'ny nandidiany ny fampahalalam-baovao shinoa haka fahazoan-dalana hampiasa ny votoatim-baovao avy any ivelany, mamotika ny fikambanana sy ny mpanao gazety mizara ny vaovao ara-piarahamonina koa ireo fepetra, toy ilay sehatra malaza fitorahana bilaogy madinika Sina Weibo, izay raha ny tokony ho izy dia tsy tafiditra ao anatin'ny resaka fanontàna.
Vakiana toy izao [zh] ny filazana navoakan'ny fampahalalam-baovaom-panjakana Xinhua any Shina :
Tsy misy mpilaza vaovao mahazo mampiasa ireo vaovao avy any ivelany na tranonkala vahiny nefa tsy nahazo alalana akory. Voarara ankitsirano ireo mpanao gazety sy mpanonta gazety tsy hampiasa ny aterineto ho toy ny sehatra iray ahazoana tombontsoa tsy ara-dalàna; araha-maso sy saziana araka ny lalàna ny fitondrantena tahaka izany. Mba hanokafana kaonty ofisialy ao amin'ny Weibo, ireo masoivohon-gazety dia tsy maintsy mampilaza mialoha ny tompon'andraikitra ary manondro olona iray ho tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny vaovao azo antoka sy hanaisotra ara-potana ny vaovao manohintohina.
Ny ankamaroan'ny tantara avy amin'ireo pejin'ny vaovaon'ny gazety vahiny tantanan'ny fanjakana dia avy amin'ny masoivohom-baovao iraisam-pirenena. Araka ny lazain'i The Telegraph, ny fanakanana ny fampiasana ny fampahalalam-baovao vahiny dia hisy akony goavana eo amin'ny gazety shinoa.
Nitarika hasosorana teo amin'ny maro mpampiasa ny tambajotran'ny Weibo ny vaovao, anisan'izany ireo mpanao gazety. “Qingdeng Xiaxiangmingbian”, mpanao gazety avy ao Pékin dia nanoratra [zh] fa :
Ny aterineto ao Shina, avy amin'i Karen Roach tao amin'ny Shutterstock
Tena ilaina ny fanaraha-maso ny hevi-bahoaka hisian'ny fiarahamonina mendrika, ny maridrefin'ny tsikera no maridrefin'ny demokrasia”, raha tsy malalaka ny tsikera, tsy misy dikany ny fideraderàna”. Ny famintinana dia miainga avy amin'ny hevitry ny maro fa tsy amin'izay nofinidin'ny tomponandraikitra.
Nametra-panontaniana [zh] i “Lida Suibi”, mpampiasa aterineto raha toa ny fisian'ny fangejàna eo amin'ny filazam-baovao ka mbola hisy vokany amin'ny fotoana maharitra :
Inona no atao hoe vaovao manimba? Mino aho fa ny vaovao marina sy diso fotsiny ihany no misy. Ny tanjon'ny vaovao dia ny hanambara ny fahamarinana, izay filàna fototra ilain'ny fiarahamonina. Ny ankamaroan'ny vaovao manimba toa izay voafaritry ny fandemen-tsaina avy amin'ny departemanta tamin'ny tantaran'ny repoblikan'i Shina dia voamarina fa mahomby. Ny fisakanana ny vaovao sy ny fanehoankevitra dia mety handaitra amin'ny fotoana fohy, saingy tsy ho ela velona ny politika fandàvana ny filàn'ny tena tahaka izany.
Iray hafa, mpampiasa aterineto, “Yun Mu”, no nanisy feo [zh] ny fihetseham-po tamin'ny ohabolana shinoa hoe :
Arakaraka ny hanafenana, vao mainka hibaribary.
Nanoratra [zh] tamim-panesoana i “Ye Laodie aiLvse”
Hanjary ho toa an'i Korea avaratra ve isika?
Nanipika [zh] ny fahambangàna ao amin'ilay lalàna vaovao mikasika ny fampahalalam-baovao any Shina ilay mpanao gazety Liu Xiangqian:
Tena tara any aorian'ny fivoaran'ny toe-javatra ireo lalàna sy fitsipika! Raha ny hevitry ny lalàna, tsy noheverina ho toy ny fampahalalam-baovao ny aterineto, mba tsy hitanisana ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra, na “citizen media”!